बैंक वित्तमा कोरोनाको सन्त्रास: यस्ता छन् चुनौती - Banking Khabar
बैंक वित्तमा कोरोनाको सन्त्रास: यस्ता छन् चुनौती
Bankingkhabar /January 12, 2022
बैंकिङ खबर/नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणको दर केही दिनयता बढ्न थालेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार एक साता नबित्दै कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमित दोब्बरले वृद्धि भएको छ। गत मंगलबार ५ हजार ९४ जना सक्रिय संक्रमित रहेको नेपालमा मंगलबार त्यो संख्या ९ हजार ५ सय २२ पुगेको छ।
पछिल्लो एक सातायता दैनिक संक्रमितको संख्या लगातार बढेसँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या बढेको हो । बुधबार एकैदिन ३ हजार ७५ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। केही दिनयता नेपालमा पनि समुदायस्तरमा ओमिक्रोन भेरियन्ट फैलिएसँगै संक्रमण ह्वातै बढेको छ ।
ओमिक्रोन भेरियन्ट अन्य भेरियन्टभन्दा बढी संक्रामक रहेका कारण यो संख्या अझै बढ्ने देखिन्छ। यही हिसाबले माघको पहिलो सातातिर दैनिक संक्रमितको संख्या उत्कर्षमा पुग्ने देखिन्छ ।
सरकारले भिडभाड कम गर्न माघ १५ गतेसम्म विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। साथै २५ जनाभन्दा बढी मानिस एकैठाउँ जम्मा हुन नपाइने र सार्वजनिक स्थलमा वा सेवा लिन जाँदा अनिवार्य खोप कार्ड हुनुपर्ने नियम बनाएको छ । यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि भन्दै १८ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ। कोभिड–१९ को बढ्दो संक्रमणलाई मध्यनजर गरी यसको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारलाई थप प्रभावकारी बनाउन कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) को सिफारिस एवं गृह मन्त्रालयको निर्णय अनुसार मंगलबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरि आदेश जारी गरिएको हो । सूचनामा बैंक तथा वित्तिय संस्थामा स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरि सेवा प्रवाह गर्न निर्देशनसमेत दिइएको छ।
सूचनामा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सेवाग्राहीको बढी चाप हुने कार्यालयहरु (जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, बैंक तथा वित्तिय संस्था आदि) मा भिडभाड नहुने उपयुक्त तरिका सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले अवलम्बन गरि, गराई स्वास्थ्य मापदण्डको पालना हुने गरी सेवा प्रवाहको प्रबन्ध मिलाउने।’
नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि कोरोनाको संक्रमण दर बढ्दै गएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कोभिडसँग सम्बन्धित निर्देशन जारी गरेको छ । पछिल्ला केही दिनमा कोभिड–१९ को संक्रमण नयाँ स्वरुपमा फैलँदै गएको र सोही रुपमा नेपालमा समेत संक्रमण फैलने संकेत देखिएकाले संक्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्दै आवश्यक स्वास्थ्य सतर्कतासहित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्यवसायिक निरन्तरताको समेत सुनिश्चितता गर्नुपर्ने हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई विभिन्न ४ बुँदे निर्देशन जारी गरेको हो । राष्ट्र बैंकले देहायका व्यवस्थाहरु अवलम्बन गरि पूर्ण सजगताका साथ कारोबार सुचारु गर्न/गराउन निर्देशन दिएको छ।
राष्ट्र बैंकले दिएको ४ बुँदे निर्देशन :
१. नेपाल सरकार तथा विश्व स्वास्थ्य संगठनको स्वास्थ्य सुरक्षासम्बन्धी मापदण्डको पालना गरि सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने जनशक्ति तथा सेवाग्राहीमा संक्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न आवश्यक उपायहरु अवलम्बन गर्ने ।
२. सेवाग्राहीको भिडभाड नहुने तथा भौतिक दूरी कायम हुने व्यवस्था मिलाई सेवा प्रवाह गर्ने ।
३. बैंक तथा वित्तीय संस्थाद्वारा संचालित एटिएम बुथहरुबाट हुन सक्ने संक्रमण जोखिम न्यूनीकरण गर्न ढोका खुला राखी स्यानिटाइजर लगायतका सामग्रीको व्यवस्था गर्ने ।
४. बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट संचालन गरिने बैठक, गोष्ठी, सेमिनार, तालिम जस्ता कार्यक्रमहरुमा भौतिक दूरी निश्चित गर्ने वा यस्ता कार्यक्रम सकभर भर्चुअल माध्ययमबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
बैंकिङ क्षेत्र दैनिकरूपमा भिडभाड हुने ठाउँमा पर्छ। सेवाग्राहीको भिडभाड हुने तथा नियमित सेवा दिनैपर्ने भएकाले यो क्षेत्रलाई संक्रमणको उच्च जोखिम क्षेत्रका रुपमा लिइँदै आएको छ। विगतका दिनहरूमा पनि बैंकका कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण देखिन थालेपछि बैंकिङ क्षेत्र ‘कोरोना हटस्पट’ बन्न थालेको थियो ।
करिब ८० प्रतिशत कर्मचारी ‘वर्क फ्रम होम’मा थिए भने उपत्यकाबाहिर र उपत्यका भित्र पनि बैंकका शाखा कार्यालयहरूमा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो। उपत्यकाबाहिरका धेरैवटा बैंकिङ शाखाका कर्मचारीमा संक्रमण देखिएपछि शाखा कार्यालय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो। अहिलेको अवस्थामा पनि कोरोनाको संक्रमण बढ्दै जाँदा त्यो स्थिती अथवा त्योभन्दा पनि कठिन अवस्थाको सामना गर्नु नपर्ला भन्न सकिँदैन ।
विगतका दिनमा अन्य क्षेत्रजस्तै बैंक वित्तमा पनि यसले असर गर्यो । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी र उनीहरुको परिवार गरि पहिलो र दोस्रो लहरमा १९ हजारभन्दा बढी प्रभावित भए । राष्ट्र बैंकका अनुसार १४ हजार बढी बैंक वित्तका कर्मचारी संक्रमित भएका थिए भने एकाघर परिवार ६ हजार बढी संक्रमित भएको अवस्था थियो ।
१ सय २६ भन्दा बढीको कोरोनाकै कारण ज्यान गएको थियो । जसमध्ये कर्मचारी २४ र परिवारको संख्या १ सय २ जना थिए । पछिल्लो दोस्रो लहरमा कर्मचारी र उनीहरुका परिवार गरेर ८ हजार ६ सय बढी संक्रमित थिए । बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारी र उनीहरुका परिवार कोरोना संक्रमणबाट त्यतिकै प्रभावित भए ।
कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि जारी गरिएको निषेधाज्ञाका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह र निक्षेप संकलन स्थिर रह्यो। लकडाउनका बेला आर्थिक गतिविधि ठप्प भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह र निक्षेप संकलन पनि प्रभावित भयो । बैंकहरुले आलोपालोका आधारमा दैनिक २५ प्रतिशत शाखा मात्र सञ्चालनमा ल्याएका थिए ।
चुनौतीहरु आउन सक्छन्ः प्रवक्ता डा. भट्ट
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट कोरोनाका कारण बैंक तथा वित्तका सेवा सञ्चालनमा केही चुनौतीहरु देखिन सक्ने बताउँछन्।
प्रवक्ता भट्ट भन्छन्, ‘अहिलेको अवस्थामा बैंकहरुले स्टाफ म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्यो । शाखाहरु कसरी चलाउने ?, बैंकहरुको तर्फबाट कसरी डे टु डे सेवा दिने भन्ने नै चुनौती हुन्छ। पहिले पनि यो अवस्था आएको हो । ग्राहकको पाटोबाट हेर्दा बैंकमा लाइन बस्ने, एटिएममा लाइन लाग्ने हुनसक्छ । त्यस्तो बेला सतर्क हुनुपर्ने हुन्छ । यी दुईटै पार्टमा चुनौती छ।’
प्रवक्ता भट्ट थप्छन्, ‘अर्को अहिले सामान्य हुँदा केही भएन। भोलि स्टाफहरु संक्रमित हुन थाले भने कतिपय ठाउँको सेवा अवरुद्ध हुन सक्छ। अहिले हामीले पनि निर्देशन जारी गरेका छौं। त्यसलाई विर्सनु हुँदैन । स्वास्थ्य मापदण्ड पूर्ण पालना गर्नुपर्यो । स्टाप र कष्टम्बरको सेफ्टी दुई वटै कुरामा सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ।’ कोभिड बढेर व्यापार–व्यवसाय रोकियो भने यसको प्रत्यक्ष असर बैंक वित्तहरुमा पर्ने प्रवक्ता भट्ट बताउँछन् ।
यता डा. रविन्द्र पाण्डे बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कोरोनाको जोखिम उच्च हुने भन्दै सचेत रहन आग्रह गर्छन् । ‘बैंकहरूले मापदण्डअनुसार काम गनुपर्ने देखिन्छ । स्यानिजाइजर, माक्सलगायत सुरक्षाका निर्धारत सबै उपाय अवलम्बन गरेर मात्र सेवा दिनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘कोभिड काउन्टर भनेर विभिन्न देशले खोलेका छन् । यहाँका बैंकहरूले पनि यस्तो काउन्टर छुट्टै खोल्नुपर्ने देखिन्छ।’